Chirming Iposta - Imagazini yoyilo
Iposta Xa uSook wayesemncinci, wabona intaka entle intaba kodwa intaka ibhabha ngokukhawuleza, ishiya isandi kuphela. Wajonga esibhakabhakeni ukuze afumane intaka, kodwa eyona nto wayeyibona yayingamasebe emithi kunye nehlathi. Intaka yaqhubeka nokucula, kodwa yayingazi apho ikhoyo. Ukusukela esemncinci kakhulu, intaka yayingamasebe omthi kunye nehlathi elikhulu kuye. La mava amenza ukuba abe nombono wesandi seentaka ezinjengehlathi. Isandi sentaka siphumza ingqondo nomzimba. Oku kwamtsala umdla, kwaye wadibanisa oku ne-mandala, ebonakalisa ukuphiliswa nokucamngca.
Igama leprojekthi : Chirming, Igama labayili : Sook Ko, Igama lomthengi : Sejong University.
Iposta Sook Ko Chirming